၂၀၁၈ အတွင်း သူတို့ရဲ့ Relationship အကြောင်း Official ကြေညာခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်စုံတွဲများ
On April 12, 2018 April 12, 2018 By Naing Naing
ကဲ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ အရမ်းကိုလူတွေအံအားသင့်ခဲ့ရတဲ့ ဦးနဲ့ခေးစုံတွဲအသစ်စက်စက်လေး Lee Dong Wook နဲ့ Suzy တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလုံးဝမထင်ထားတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ခုဆိုရင် အရမ်းပျော်ရွှင်ရတဲ့ ချစ်သူဘဝလေးကိုဖြတ်သန်းနေကြမှာပါ။ မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ Agency အသီးသီးကနေပြီး သူတို့နှစ်ယောက် တွဲခုတ်နေကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Suzy ရဲ့ပြောစကားအရ Ajussi ကသူ့အပေါ် အရမ်းဂရုစိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ?
A post shared by 이동욱 (Official_Instagram) (@leedongwook_official) on Feb 3, 2018 at 9:11pm PST
A post shared by 숮이 ???????????? (@skuukzky) on Mar 20, 2018 at 7:26pm PDT
နောက်တစ်တွဲကတော့ သဘာဝမင်းသမီးလေး Park Shin Hye နဲ့ Choi Tae Joon တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝမင်းသမီးဆိုတဲ့အတိုင်း သူမရဲ့ Relationship ကိုလည်း သဘာဝအတိုင်းလေး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့မြင်မိပါတယ်ရှင့်။ Shin Hye တို့အတွဲလေးကတော့ မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ပရိသတ်ကြီးကို သူတို့ Relationship အကြောင်းအသိပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
A post shared by 최태준 (@actorctj) on Jan 1, 2018 at 12:59am PST
A post shared by 박신혜 (@ssinz7) on Aug 25, 2017 at 11:02pm PDT
တတိယအတွဲလေးကတော့ BEAST အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Hyunseung နဲ့ ဘိုးလင်းအားကစားမယ် Shin Soo Ji တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးက ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာ Hyunseung ရဲ့ Manager ကနေတဆင့် သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ RS သက်တမ်းက ၅ လလောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ပရိသတ်ကြီးကိုအသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်တွဲက အားလုံးရဲ့အချစ်တော် လူကောင်သေးသေးလေးနဲ့ အမြဲစတိုင်အပြည့်နဲ့လန်းနေတဲ့ Bigbang အဖွဲ့ဝင် G-Dragon နဲ့ After School ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Lee Jooyeon တို့စုံတွဲလေးပါ။ သူတို့နှစ်ဦးက ၂၀၁၇ နှစ်လည်လောက်ထဲက Video File တစ်ခုကို Social Media မှာ တင်ခဲ့ပြီး Dating Rumor တွေထွက်နေခဲ့တာပါ။ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ ‘Dispatch’ media ကနေ Jeju ကျွန်းမှာ သူတို့နှစ်ဦး Dating လုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း လက်ပူးလက်ကြပ်မိခဲ့ပါတယ်။
A post shared by 권지용 (@xxxibgdrgn) on Aug 13, 2017 at 5:22am PDT
A post shared by 이주연 (@jupppal) on Dec 28, 2017 at 11:15pm PST
ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာပဲ Lee Joon နဲ့ မင်းသမီးချောလေး Jung So Min တို့စုံတွဲက သူတို့ရဲ့ Relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီး Confirm လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ Lee Joon ရဲ့စစ်မှုထမ်းအချိန်ကာလကတည်းက သူတို့နှစ်ဦး Date နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
A post shared by 이준 leejoon (@leechangsun27) on Oct 17, 2017 at 7:59am PDT
A post shared by 정소민 (@somin_jj) on Mar 18, 2018 at 2:10am PDT
MBLAQ ရဲ့အဖွဲ့ဝင် GO ကလည်း ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှာ မင်းသမီးလေး Choi Ye Seul နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်တာ ၇ လနီးပါးရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
A post shared by 지오 G.O (@jung_g_o) on Jan 27, 2018 at 7:06am PST
နောက်တစ်တွဲကတော့ ဦးနဲ့ခေးစုံတွဲလေးပါ။ Kara အဖွဲ့ဝင် Youngji ကနေပြီး Guckkasten အဖွဲ့ဝင် Ha Hyun Woo နဲ့ သူတို့နှစ်ဦးချစ်သူတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဝန်ခံခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးက မနှစ်က tvN မှနေပြီးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ‘Shadow Singer’ ဇာတ်ကားလေးမှာစတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၆ လအကြာမှာ သူတို့နှစ်ဦး ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ Youngji ရဲ့ Agency ကနေပြီးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
A post shared by 허영지 youngji Hur (@young_g_hur) on Jan 28, 2018 at 1:47am PST
SBSကနေပြီး ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ ‘Romance Package’ အစီစဉ်ရဲ့ MC တွေဖြစ်တဲ့ Jun Hyun Moo နဲ့ Han Hye Jin တို့ရဲ့ Dating လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ MBC ရုပ်သံကနေထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ ‘I Live Alone’ အစီစဉ်မှာ စတင်သိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ သူတို့နှစ်ဦးက Real Life မှာလည်း တကယ့် ချစ်သူတွေပါဆိုတဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
A post shared by 한혜진 (@modelhanhyejin) on Nov 16, 2017 at 9:40pm PST
ခုလာမယ့်အတွဲလေးကတော့ ဟိုတစ်လောလေးကမှ Dating Confirm လုပ်ထားတဲ့ အိုးမင်းသားလေး Kim Bum နဲ့ ‘Hwayugi’ ဇာတ်ကားလေးထဲက မင်းသမီးချောလေး Oh Yeon Seo တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးက မြင်မြင်ချင်းအချစ် ဆိုတာကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ Idol Couple လေးပါ။ သူတို့နှစ်ဦးက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိကျွမ်းတာ အရမ်းမကြာလိုက်ဘဲ တစ်လအတွင်းမှာပဲ Relationship ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူတို့မှာ အရမ်းကိုတူညီတာတွေများကြပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်ပေးနိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
A post shared by 김범 (@kim_bum) on Mar 28, 2018 at 7:25pm PDT
A post shared by 오연서 (@ohvely22) on Mar 20, 2018 at 12:33am PDT
ကဲ…အားလုံးသော Kpoper တွေအတွက် လက်လှမ်းမှီသလောက် Idol Couple လေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးတို့သဘောတူကြတဲ့ စုံတွဲလေးတွေပါတယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်းကျေနပ်မိတယ်လေနော့်။ ?
PREVIOUS POST Previous post: လက်ရှိအချိန်ထိတိုင်အောင် ပရိတ်သတ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အကြီးအကျယ် ရရှိနေတဲ့ Selena နဲ့ Justin တို့ရဲ့ relationship
NEXT POST Next post: ကမ္ဘာ့လှည့် ဂီတဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုအားကောင်းတဲ့ Pink ရဲ့ Music Video အသစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့